Puntland oo ciidan u xirtay Shabaab ka baxsaday Garowe iyo Shabaab ki baxsaday oo qaar la qabtay. – Hornafrik Media Network
Garowe-Hornafrik-Maamulka Puntland ayaa wado dadaalo lagu soo qabanayo dhalinyaro la sheegay in ay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ee Puntland kuwaas oo ka baxsaday xero dhaqan celin oo ku taalla magaalada Garowe ee Xarunta Puntland.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Ciidamada amaanka Puntland ay xabsiga dhigayn Tiro ka mid ah Ciidamada Puntland kuwaas oo la aaminsan in ay fududayeen baxsashada Maxaabiistaan la sheegay in ay shabaab ka tirsanaayeen.
Ciidamada la xiray ayaa ka tirsan Ciidamada Asluubta Puntland iyo Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada waxaana la sheegay in ay waxaana la sheegay in ay fududeeyeen Baxsashada Shabaabkii ku xirnaa Guri ku yaala magaalada Garowe.
Sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in ay soo qabtayn 8 kale oo ka mid ah Maxaabiistii ka baxsatay Guri ku yaalla magaalada Garowe ee xarunta gobalka Nugaal, sidoo kale ah Xarunta Puntland, Puntland ayaa sheegtay in ay dib usoo qabatay 3 kale oo ka mid ah dhalinyaradii ka baxsatay Xerada dhaqan celinta waxayna tirada dib loo qabtay ay noqoneysaa 11 qof, wali waxay baadi goob ugu jiraan 3 kale oo ka maqan gacanta Ciidamada kana tirsanaa Maxaabiistii ka baxsatay Guriga dhaqan celinta ee Garowe.